Ngubani ongazange abone umonakalo ngesimo sekhofi echithekile etafileni, umquba weesitya kwi-sink kunye ne-mess in the apartment. Nokuba inkosikazi eyona mzekelo yayinomnye kwimiba enjalo, ingakumbi emva kwemibhiyozo ethile, iiholide. Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule, elinde iindwendwe, waxhoma iibhaluni ngenkuthalo, walungiselela indlu yokubhiyozela, namhlanje yonke into iphelile, ikhandlela sele iphume, kwaye uqala ukukhathazeka ngenxa yentleba, emva kokuba umdlalo uphele.
Mhlawumbi, izikhalazo ezinjalo zingenakugwema, kodwa amaqela aphakamileyo ayenzeka ngeeholide athinte ngaphantsi kwintlupheko endlwini ngaphandle kwentlangano yabesifazane kunye noqoqosho. Iingcebiso ezimbalwa zokungena kwindlu, ngokuphindaphindiweyo kwimihla ngemihla, ukucoca okuqhelekileyo kwintlalo ekhethekileyo ayiyikuyihambisa, ukuba ingazange ifakwe isicwangciso somsebenzi, apho yonke into ifakwe kwiithalafu. Sincoma ukuba ukhumbule iingcebiso ezilula ezinokukunceda ulungiselele umsebenzi wakho malunga nendlu. Nangona ukucoca okuncinci kwindlu kufuneka kuqalwe ngumbutho kunye nokucwangciswa kwesicwangciso sokucoca, apho yonke into iyanyathela ngesinyathelo.
Ukucoca kufuneka kuqale kwigumbi elilodwa, ngelixa ungagcinanga ingqwalasela yakho kwimizi yamanye amagumbi, uze uqhubeke ucoca kumagumbi aseleyo. Ngokukodwa xa kukho ukucoceka ngokubanzi okanye ukufuduswa, le ndlela ikuvumela ukuba ulethe indlu yakho ngendlela efanelekileyo. Fumana ikona ekhethekileyo kwindlu kwaye ufake izinto ezingekho ndawo. Le yindlela efanelekileyo yokufumana indawo kwindlu nganye, yiba yinto yokuzithandela yomntwana wakho, okanye incwadi.
Musa ukuphosa izinto ngaphandle kokuzisola.
Musa ukuchitha ixesha lakho kwizinto ongazange uzisebenzise ixesha elide. Thumela imfucuza yamanzi kwinqwaba, nikela abahlobo abanolwazi kwifayile endala yamaphephancwadi. Yaye uzame ukungalahla iimathoyizi kunye neempahla ezindala, unako ukubanika abo bafuna okanye kwiinkedama.
Fumana isikhala samahhala ngezinto ongazithandanga.
Mhlawumbi, kwindlu nganye kunokufunyanwa i-mezzanine, ibhokisi yokuhlobisa, ibhokisi elingenanto okanye i-locker engenanto. Zisebenzise ngokukhuselekileyo ukugcina ezo zinto ongaziqhelanga ngazo, ongayisebenzisi ngaphezu kokuphindwe kabini ngenyanga. Gcwalisa ezi zinto ngokwexesha lokusetyenziswa kunye nokuba zifanelekile.
Fundisa abantwana ukuba benze umyalelo kumdlalo.
Igama elithi "ithoyilo" liguqulelwe ligama elithi "umyalelo". Umzekelo, xa abantwana belibale ukuba kufuneka ubophe ingubo kwikhamera, cingela i-hook-hangers ezithakazelisayo kwi-wardrobe yengane, eya kubangela umdla wabantwana kwimifanekiso yakho. I-hook kunye nendlovu okanye umvundla awunakwenzeka ukushiya umntwana engenandaba kwaye akayi kuba nomdla kuye. Cacisa ngendlela engabonakaliyo kumntwana wakho ukuba unike ibhakethi elihle ngamaphepha kunye nebhokisi eneekontrakthi ezintathu, ezintle kwaye zikhanya, kuphela ekusebenziseni. Kufuneka abe noxanduva lokucoceka nokulungiswa kwaye abe ngumnini wayo. Mhlawumbi, kunye nomntwana wenza ezinye izinto zobugcisa, amathoyizi, ukudala ubugcisa kwaye emva koko konke oku kuvela kulo msebenzi kunokwenzeka ukuba ufumane inzuzo emibini. Ukuyila nokudala "ilizwe lomyalelo" kumntwana wakho.
Yonke into inendawo yayo.
Beka yonke into kwindawo yayo. Xa ukhawuleza, xa uya kuhamba ukusuka esibukweni ukuya kwamanye amagumbi, ungakulibali ukubeka ikhefu endaweni yakho, ukuze kamva ungasayi kuwujonga. Ukuba ulandela umgaqo "yonke into yindawo yakho," ngoko ke ungalondoloza ixesha lokucoca, akudingeki uchithe ixesha ukukhangela into elahlekileyo.
Kubalulekile ukusabalalisa imisebenzi yasekhaya.
Buza umzi wakho ukuba athathe ezinye zezindlu kwizandla zakhe. Ukuba unika umsebenzi omncinci kubantwana kunye nomyeni wakhe, hlambulula umquba uze uthathe inkunkuma, oko kuya kuba luncedo olukhulu kuwe. Xa ubeka izinto ngokulandelelana, vumela lonke intsapho iqale inxaxheba, kuba xa induduzo yenziwa ngumntu wonke, yenza ukuba ibe yinto ecocekileyo. Musa ukulibala ukudumisa abancedisi bokucoca.
Awudingi ukuhlawula lonke ishishini ngosuku olunye, ukusabalalisa yonke imicimbi yoshishino ngokubaluleka, ixesha elingakanani ochitha kuzo. Ukuba ezinye iimeko zingalinda ngeveki, ngoko into enjengokucoca uthuli kwifenitshala, yenze kanye emva kweentsuku ezintathu. Ngaloo ndlela, unokunciphisa kakhulu ixesha elinikezelwe ukucocwa ngokubanzi kwaye akuyi kuba nzima. Ukuba u landela lo mgaqo, uza kukhangela umsebenzi owufanele ukuwuqwalasela imihla ngemihla. Kuya kuba ngcono xa uceba ukucoca kwakho ngeveki.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba indlela efanelekileyo yokuzisa umyalelo kwindlu iya kuba kukuthintela lo myalezo. Kwaye nayiphi na imisebenzi yakho yasekhaya, akufanele sikhohlwe ukuba konke oku kuyenzelwe ukufudumala kwentsapho kunye nomoya. Ngaba le nto yokucoca iyakwenza into engalungile, ukuba sele ikhona iyure emva kwayo, unokuzonwabisa nokujonga iiprogram zikamabonwakude nentsapho yolonwabo. Akunjalo, kwaye oku kuya kuba ngumvuzo omnandi weengcebiso. Ukwazi ezi zimbalwa iingcebiso malunga nomyalelo endlwini, unokwenza umyalelo, ucoceko kunye nentuthuzelo ekhaya lakho. Sifisa ukuba ucoceko kunye nocwangco endlwini, kwaye kwindlu yakho, intuthuzelo noxolo lwengqondo.
Prostokvasha kunye nokusetyenziswa kwayo ekhaya
Imfihlelo emincinci yokupheka
Indlela yokukhawuleza ukulahla iindiza
I-Tarot Divination ngekamva: njani ukufunda ukuqiqa amakhadi aseTarot mahhala
I-homeopathy yokunceda abantwana kunye nabasetyhini abakhulelweyo
Amanqanaba okuphuhliswa komntwana ngexesha lokukhulelwa
Okroshka kwi kvass kunye ne-sausage
Imifuno ehlongoziwe okanye iMifuno esebenzayo
Umhlobiso ongaqhelekanga wetafile yeholide: isaladi "Isidlo semithi yomthi"